Bressert Auto Trading Technology - Bot - Auto Trading Systems - Zviratidzo - Kutengeserana Migwagwa
Auto Trading Trading Systems - Zviratidzo - Trading Courses
Zvimwe NezveBressert Trading Technology View zvakawanda
CycleTrader Trading Indicator
Mutengo Wenyaya Patinenge taita zviratidzo izvi, taita izvi nechikonzero ... kuti tibatsire nemafambiro, kupinda uye ...
Zvose zvaunoda ndedzimwe pfungwa inogona kuchinja mararamiro ako. Kana iwe wakaziva maitiro aya uye ona ...
Mhuri yeBressert yave iri mune bhizinesi yekuvandudza teknolojia yekutengesa kubvira 1971.Ise yakatanga Walter Bressert iyo yakavakirwa pabasa rake rose kumativi ekutengeserana mazano. Nzira dzake dzekutengesa dzakabata zviuru zvevatengesi kumativi ose enyika.
Walter Bressert's - Simba reAscillator Purogiramu Dzakasiyana
Walter Bressert's - 12 Cardinal Mistake kuna Trading hwamangwana
Walter Bressert's - Kutengesa uye Kudzora
Join yedu YouTube mugero uye tarisai yakawanda anobatsira zvokutengeserana mavhidhiyo mumwe mwedzi
Verenga Dambudziko Rokuzivisa Usati watenga kana kubvisa chero ipi zvayo mumiti yepaiti ino.
Zita rizere *
Mubvunzo? / Comment? / Demo? *
Copyright 2016. Bressert Trading Technology - Kodzero dzose dzakachengetedzwa
Maitiro ekugadzirisa matanho ane zvakawanda zvisingakwanisi zvisizvo, Zvimwe zvacho zvinorondedzerwa pasi apa. Hapana mumiririri ari kuitwa Kuti chero nhoroondo ichaita kana kuti inogona kuwana purogiramu kana kuti inorasikirwa yakafanana kune avo vakaratidzwa; Ichokwadi, pane nguva dzakawanda kupesana kwakakosha Pakati pekufungidzira kushanda kwemigumisiro nemigumisiro chaiyo Yakazoitwa nemhando ipi zvayo yekutengeserana. Chimwe chezvikwereti zvekufungidzira kushanda kwakaguma ndezvokuti zvinowanzogadzirirwa pamwe nekubatsirwa kwekutarisa. Mukuwedzera, kushambadzira kwepfungwa hakuiti kusanganisa kwemari, uye hapana Hypothetical rekodhi rekodha rinogona kuverenga zvachose zvakakonzerwa Nengozi yemari yekutengesa chaiyo. Semuenzaniso, kukwanisa Kumira kunorasikirwa kana kubatana pane imwe purogiramu yekutengeserana Mukuda kwekutengesa kurasikirwa zvinhu zvinogona kukanganisawo zvigaro zvekuita zviitiko zvekutengesa chaiyo. Kune zvimwe zvinhu zvakawanda zvinowanzoenderana nemisika mune zvese kana kuti kushandiswa kwemhando ipi neipi yepurogiramu yekutengeserana isingagoni kunyatsorongedzerwa zvakakwana mukugadzirira kwekufungidzira kushanda kwemigumisiro uye zvose zvinogona kukanganisa zvido zvemabhizimisi Kuparidzirwa kwehungwaru: Futures uye forex trading inowanikwa Panjodzi uye haisi yevatengesi vose. Mumwe mutengesi anogona kukwanisa kurasikirwa zvose kana kupfuura zvinotengeswa pakutanga. Dambudziko guru ndiro mari inogona kurasikirwa pasina kuparadza iyo kuchengetedza kwemari kana mararamiro ehupenyu. Chengeterwo chete inofanira kushandiswa pakutengesa uye chete avo vane ngozi yakakwana mari inofanira kuongorora kushambadzira. Basa rekare harisi izvo zvinoratidza zviitiko zvemunguva yemberi. Kuzivisa: kushandiswa kwezvikwereti uye zvigadzirwa zvinosanganisira ngozi dzakawanda uye hazvifaniri kuitwa pasina kunzwisisa njodzi dzose dzine chokuita nekutengesa uye kutenga zvekuchengetedza. Mutengesi, profittrader software inotsanangurwa pano yakagadzirirwa kuva chirongwa chekubatsira vatengesi muzvisarudzo zvekutsvaga. Iwe unongova mutoro wekuongorora nekugadzirisa nguva uye ndezvipi mazita ekubatanidza chero kupi zvako kwekutengeserana, uye kugadzirisa kukodzera kwezvisarudzo zvako. Nokukweretesa mune zvigumisiro kana zvigadzirwa, unogona kurasikirwa nemari yako yose mari. Basa rekare haritsigiri misi yeramangwana. Chero hupi hwekutengeserana huchibva panzvimbo ino hunoti haufaniri kuita kuti uwane mari uye unoda kunzwisisa njodzi inowanikwa pamusoro apa.